‘जिल्ला समन्वय समिति समावेशी हुनुपर्छ’ |
‘जिल्ला समन्वय समिति समावेशी हुनुपर्छ’
प्रकाशित मिति :2017-08-04 15:15:22
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका केही जिल्लाहरुमा जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसकेका छन् । केहीमा भने समिति गठनको प्रकृयामा छ । यहि सन्दर्भमा संघीय मामिलाका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटासँग महिला खबरका संवाददाता खेमा बस्नेतले जिल्ला समन्वय समितिको गठन, यसको काम र समितिमा महिला सहभागिताको विषयमा गर्नुभएको कुराकानी ः–
– जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला सभा रहन्छ । जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभाले प्रमुख र उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाभित्रका गाउँ सभा र नगरसभाको सदस्यले समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार दिन सक्नेछन् ।
– गाउँ र नगरकार्यपालिकाको निर्वाचनको झैं यसको चर्चा भएको पाइएन । जिल्लामा यो समितिको भूमिका के हुन्छ ?
यसमा आम जनताले भोट हाल्नु परेन । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले पनि भोट हाल्नु परेन । त्यसैले कम चर्चा भएको हो । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने अधिकार छ । समितिको अधिकार पनि कम छ । समन्वयको काम मात्र गर्ने भएकाले यसको चर्चा कम भएको हो । समितिको भूमिका भनेको समन्वय गर्ने, क्षेत्र क्षेत्रबीच योजना बनाउने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने काममा सहयोग गर्ने हुन्छ ।
– तपाईंले समन्वय त भन्नुभयो । यो समितिले कसरी समन्वय गर्छ ?
पहिलो त यस समितिले जिल्ला स्थित स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गराउने काम गर्छ । जस्तो की जिल्लाभित्रका गाउँपालिका÷गाउँपालिका, नगरपालिका ÷नगरपालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीचको काममा कस्तो तादतम्य छ कसरी कामहरु भइरहेको छ अनुगमन गरेर यसले समन्वय गर्छ । स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकाबीचको समन्वयको काम पनि यो समितिले गर्दछ । विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने कामहरु यसले गर्दछ । संविधानमा समन्वयको काम मात्र गर्ने लेखेको छ । समन्वयको विस्तृतमा व्याख्या अझै भएको छैन । भोेली संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बनेपछि थप कामहरु थपिन सक्छ ।
– जिल्ला समन्वय समिति लैंगिक रुपले समावेशीता हुन जरुरी छ कि छैन ?
लैगिंक रुपमा समावेशीता हुनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । त्यसैले यसले लैंगिक रुपमा पनि महत्व दिएको छ । दलित र अल्पसंख्यक पनि रहेकाले यसले समावेशी सिद्धान्त अगिंकार गरेको छ ।
– जिल्ला समन्वय समिति लैंगिक रुपले समावेशी हुँदा र नहुँदा के फरक हुन्छ ?
प्रतिनिधित्व एकल भएमा स्वामित्वको बोध हुँदैन । सभागितामूलक शासन प्रणालीमा सबैको सहभागिता हुन आवश्यक देखिन्छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को मुख्य कुरा नै केन्द्रको शासन स्थानीय तहमा ल्याउनु र शासनलाई समावेशी बनाउनु थियो । यी उद्देश्य पुरा गर्ने काम स्थानीय सरकारबाट हुने हो ।
सिंहदरबारले एकल रुपमा प्रयोग गरेको शासन अब स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने छ । हरेक क्षेत्रमा पहिला पुरुष बाहुल्यता थियो । महिला सहभागिता खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले केन्द्रमा ३३ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक उद्देश्य अनुसार नै त्यसका लक्ष्यहरु पुरा गर्नेका निम्ति यसले महत्वपुर्ण अर्थ राख्छ ।
– महिला सहभागिता प्रभावकारी नभए के के कुरामा असर पर्छ ?
सवाल एउटा समुदायको नेतृत्व अर्को समुदायको भयो भने त्यसले सहि ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन । महिला, दलित जनजातीको स्वामित्व भएन भने राज्य बलियो हँुदैन । समावेशी शासनमा सबैको सहभागिता भयो भने सबैले न्याय पाएको अनुभुती गर्नेछन् । महिलाका समस्या महिलाले नै बुझेका हुन्छन् जुन कुरा पुरुषले बुझ्दैनन् । जसले समस्या बुझेको छ । त्यसले नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त्यसले न्याय पाउँछ । महिलाका सहभागिता भएन भने महिलाका मुद्धा ओझेलमा पर्न सक्छन् । तर यसले समन्वय मात्र गर्ने भएकाले गाउँ र नगरमा जस्तो त्यती धेरै समस्या पदैन ।
– जिल्ला समन्वय समितिमा रहने हुने महिलाले बुझ्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
जनप्रतिनिधिले महिलाका कस्ता मुद्दा घोषणपत्र समावेश गरेका थिए र कार्यान्वय गर्ने क गरिरहेका छन् त्यो हेर्नुप¥यो । घोषणपत्रमा लेख्ने काम नगर्ने जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्नुप¥यो । आफु बलियो हुन आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बारे जानकारी लिनु परयो । संविधान कानुनलाई बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपरयो ।
– उनीहरुले महिला पक्षीय कस्ता काम गर्न सक्छन् ? वा नेतृत्वलाई झक्झक्याउन सक्छन् ?
महिला प्रतिनिधि मात्र भएका छन् की महिलाको उत्थानका लागि केके गरेका छन् अनुगमन गर्ने, प्रमुख उपप्रमुखसंग महिलाका मुद्धा, समाजिक विभेद कसरी हटाउने छलफल गर्ने समन्वय गर्ने गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिले चुनावका प्रचारका समयमा उठाएका मुद्धालाई व्यवहारमा लागु गरे नगरेको हर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सल्लाह सुझाव दिने जस्ता कामहरु गर्ने । शिक्षामा समानता ल्याउन सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने ।
स्वास्थ्यमा सबैले समान सेवा पाएका छन् छैनन् ? पछाडी परेका वर्गको रोजगारको सिर्जना गरेको छ छैन हेर्न । पार्टीहरु नारामा प्रत्येक घरका एक जना महिलालाई रोजगार दिने कुरा गरेका थिए नारामात्र हो की दिए पनि यसको अनुगमन गर्नु जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । समग्रमा भन्दा उनीहरुले स्थानीय तहको वाचडगको रुपमा काम गर्न सक्छन् ।